सुनबुढा र गर्भवती युवतीका ताँती
महेश्वर श्रेष्ठ पञ्चायत जन्मेको महिना परेकाले हो कि पञ्चायतकालमा घटेका अनेक अनौठा र घतलाग्दा रमाइला कुराले गर्दा हो, पुस महिना लाग्यो कि पञ्च, पञ्चायत र तिनका पञ्चरंगी क्रियाकलापलाई असाध्यै सम्झने गर्छु । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको केही वर्षपछि अर्थात् विक्रम संवत्को तेस्रो दशकको आधाउधीसम्म गाँजा–चरेस, भाङ धतुरो खेती, सेवन र व्यापार खुल्लमखुला हुन्थ्यो । राजधानी काठमाडौंमा त यस्ता सामग्री बेचिने होटल–रेस्टुराँ छ्यासछ्यास्ती थिए । युवा… विस्तृत समाचार
संसदीय सार्वभौमिकता र न्यायिक सर्वोच्चता आधुनिक संसदीय व्यवस्थाका प्रमुख धरोहर हुन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीबारे गरेको निर्णयले यो मान्यतालाई बलियो बनाएको छ तर अदालतले फैसला सुनाइसकेको हुँदा अब संसद्ले कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा थप छलफल गरिरहनु नपर्ने तर्कसमेत कतिपय सांसदबाटै सुनिन थालेको छ । यसले फेरि एउटा अनावश्यक विवादमा हाम्रो महत्वपूर्ण समय खर्च हुने सम्भावना बढ्दै छ । सामान्य रूपले हेर्ने हो भने अदालतले आफ्नो… विस्तृत समाचार
पाप लाग्ला, विगत बिर्सिंदा
सुशील पन्त उप्रान्त ‘देसका महाजनलाई गोड प्रसाह देषि उँभो आउन नदिनु, देसका महाजनहरू हाम्रो मुलुकमा आया भन्या दुनिया कंगाल गरि छाड्दाछन.’ नेपाल एकीकरणका सूत्रधार राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको माथिको अंशमा देश (भारत)का महाजनलाई पर्साको वीरगन्जदेखि माथि आउन नदिनु, ती आए भने दुनियाँ कंगाल गरी छाड्दछन् भनिएको थियो । जतिवेला नेपाल–भारतबीच औपचारिक व्यापार नै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको २९५ औं जन्मजयन्ती मनाइरहँदा उनले २ सय ५०… विस्तृत समाचार
सुदर्शन मंगोल १२४ वर्षअघि २६ डिसेम्बर सन् १८९३ मा हुनान प्रान्तको शाओसान गाउँमा जन्मिएका माओलाई चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना (सन् १९२१) हुँदा संस्थापक सदस्य भए पनि मुख्य नेतृत्वमा पुग्न १४ वर्ष लाग्यो । सन् १९३५ देखि आजन्म सन् १९७६ सम्म आइपुग्दा ४१ वर्ष लामो समय मुख्य नेतृत्वमा रहनु चानचुने कुरा थिएन । ४१ वर्षमा माओले तीनवटा महान् क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । पहिलो सन् १९४९ मा… विस्तृत समाचार
कमरेड, राजावादी नै हौं त हामी ?
नारायण नेपाल कमरेड किरण, माओवादीको पालुङटार बैठक आसपास तपार्ईंसँग लामो छलफल गरेका थियांै । पार्टी संसद्वादमा गयो, मचाहिँ त्यता जान्न भनेर आश्वस्त पारेपछि आन्दोलन नयाँ शिराबाट उठ्ने आशा र अपेक्षा गरेका थियौं । संसद्वादमा नफस्ने र फस्न नदिने अठोटलाई सलाम दिएर आएका थियौं तर आजको चर्तिकला हेर्दा लाग्छ, हिजो कहाँ जान हिँडेका थियाँै, कहाँ आइपुग्यौं । भन्नुहोस् पूर्व जान हिँडेको किन पश्चिम पुगियो । अचार… विस्तृत समाचार
संकेत कोइराला एकदिन प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई कतै गइरहेका बेला अकस्मात् एउटा भालु देखा परेछ । भालु देख्नेबित्तिकै बाबुरामलाई कुनै छनक नै नदिई प्रचण्ड हत्त न पत्त एउटा रूखमा उक्लिएछन् । र, हाँगामा छेकिएर बसेछन् । हेर्दाहेर्दै भालु भट्टराई छेउमै आइसकेछ । अक्कल र अनुभवले खारिएका उनलाई सुझेछ– ‘भुइँमा मरे जसरी लम्पसार परेर सुत्यो भने भालुले केही गर्दैन ।’ भालु आएर तलदेखि माथिसम्म शरीरका हरेक… विस्तृत समाचार
विदुर खड्का डा. बाबुराम भट्टराईको एकल बहिर्गमनबाट सुरु भएको वैकल्पिक नया“ राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियानमा ३६ वटाभन्दा बढी राजनीतिक दलका हजारौं नेता–कार्यकर्ताको साथै देश÷विदेशका थुप्रै नेपाली युवा प्रवेश गरेका छन् । आखिर किन ? हुन्छ मान्छेको मनस्थितिमा परिवर्तन ? किन छाड्छ मान्छेले पुरानो घर र परिचय ? किन चाहन्छ नया“ र फरक ? किन त्याग्छ दल ? किन अर्को दलमा गर्छ प्रवेश ? ००७ सालमा… विस्तृत समाचार
कागजमा त आए है यी यी काम
वैकुण्ठ ढकाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउँछु भनेर वाचा गरेका थिए । अनि रिबन काट्न होइन, संविधान कार्यान्वयनमा पूराका पूरा ध्यान दिन्छु पनि भनेकै हुन् । कथनी र करणीमा ठ्याक्कै तालमेल मिल्यो भने त नेता कसरी हुनु, त्यहाँमाथि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै । पुस लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न भ्याई नभ्याई छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आइतबार एक… विस्तृत समाचार
दर्शन शर्मा ‘माननीय सदस्यहरू, आजको बैठक शुरु हुन्छ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव आउने कुरा थियो विशेष कारणले आउन सक्नुभएन, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि आउने कुरा थियो । अहिलेसम्म आउनुभएको छैन ।’ आइतबार व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको बैठक शुभारम्भ गर्दै सभापति प्रकाश ज्वाला । संसद् बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको सूचना आएको भोलिपल्ट ज्वालाले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बैठकमा आउन नसक्नुलाई पनि विशेष कारण भनिदिए । कारण जे… विस्तृत समाचार
भन्नैप¥यो यी कुरा भारतलाई
दीपेन्द्र पाण्डे भनिन्छ, साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन । यो भनाइको चुरो बुझ्ने मौका आमनेपालीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहनालाई पूरा गर्ने अवसर ६५ वर्षपछि प्राप्त गर्दै गर्दा राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाए । सिआइए वल्र्ड फ्याक्ट बुकको ८ अक्टोबर २०१६ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपालको सिमाना ३१५९ किलोमिटरमा चीनतर्फ १३८९ किलोमिटर र भारततर्फ १७७० किलोमिटर छ । हाम्रा छिमेकी विशाल दुई देशमध्ये चीनले तुरुन्त… विस्तृत समाचार